Nomera telefaona hyperlink misy tagan'ny vatofantsika
Nomery telefaona hyperlink amin'ny fizahana finday
Talata, Aogositra 24, 2010 Talata, Martsa 31, 2015 Douglas Karr
Hahafaka an'io ny namako, satria tsy dia mamaly ny telefaoniko aho… fa heu… ity dia ny fanampiana ny orinasa fa tsy ahy! Miaraka amin'ny fitomboan'ny iPhones, Droids ary finday avo lenta hafa dia tena fotoana tokony hanombohanao manatsara ny tranokalanao hampiasaina amin'ny tranokala finday. Vao tsy ela akory izay izahay dia nanamboatra traikefa an'ny mpampiasa iray hafa tanteraka ho an'ny mpanjifa iray, namoaka kinova finday amin'ilay rindranasa tranonkala namboarinay izy ireo ary nanatsara izany hampiasaina amin'ny iPhone sy Droid.
Na dia mety tsy zakan'ny orinasanao fanavaozana iray manontolo ny tranokalanao aza ny fampiasana finday dia misy zavatra tsotra azonao ampiharina eo noho eo: hyperlink ny nomeraon-telefaoninao amin'izay ny mpampiasa finday dia afaka manindry azy ireo fotsiny ary manomboka miantso an-tariby. Tsotra ny syntax:
A typical vatofantsika marika miaraka amin'ny rohy web dia mampiasa URL amin'ny sanda, mampiasa rohy mailaka serasera… Ny syntax ho an'ny nomeraon-telefaona dia tsotra Tel. Notsapaiko ny soatoavina miaraka sy tsy misy fononteny, vanim-potoana ary tsipika ary toa miasa amin'ny iPhone sy Droid ny zava-drehetra. Na izany aza, mbola hoferako ihany ny nomeraon-telefaona ho an'ireo isa tena izy amin'ny sanda href.
Eritrereto fotsiny hoe firy ny fiara fianjerana mety hanavotanao ny olona ka tsy tokony hiezaka ny hitadidy na hanoratra ny isa izy ireo!
Tags: tel hrefcode html ho an'ny nomeraon-telefaonarohy finday htmlrohy nomeraon-telefaona htmlhtml telefaona telefaonarohy telefaona htmlnomeraon-telefaona hyperlinknomeraon-telefaona hyperlinkrohy nomeraon-telefaona iphonerohy nomeraon-telefaonarohy fitsidihana findayrohy findaymarika nomeraorohy finday htmlrohy nomeraon-telefaonarohy nomeraon-telefaona htmlfametahana telefaonatagan'ny telefaonatag nomerao findaytag findaytag ny nomeraon-telefaona findaytag findaymarika nomeraon-telefaonanomeraon-telefaona tagtel rohy html
Paradise By the Dashboard: Ivotoerana fanaraha-maso sy atiny
Tsy fahombiazana: Ny tsiambaratelon'ny fahombiazana
Aug 25, 2010 amin'ny 6: 48 AM
Genius Doug! Mikasa ny hanomboka hampiasa izany amin'ny tranokalan'ny mpanjifako rehetra. Eny ary raha apetrako ao amin'ny bilaogiko izany? Mazava ho azy fa manome anao mpanoratra feno. Tena milay! 😎
Sep 6, 2010 ao amin'ny 11: PM PM
Ka misy ve ny antony TSY hametrahana fononteny, fe-potoana, na tsipika amin'ny nomeraon-telefaona? Ary moa ve mihetsika toy ny tag ny lohateny ny html telefaona? Misy tombony SEO ve amin'ny fanaovana mari-pamantarana lohateny ao anatin'ny kaody href?
Ny tranokalako (tsindrio raha hanitsy)
Sep 7, 2010 amin'ny 7: 08 AM
@edeckers Ny fenitra RFC3966 dia toa tsy manohana ny fehezan-teny fa kosa manohana safidy maro hafa sy marika ho an'ny fiantsoana iraisam-pirenena, fanitarana sns.
Raha ny SEO, tsy hitako izay antony tsy! Angamba ny anaran'ny orinasa + "nomeraon-telefaona" mety ho fomba tsara hampiharana!
Ao amin'ny famolavolana trano
Apr 5, 2011 ao amin'ny 6: PM PM
Salama, fika mahafinaritra izany fa nanandrana an'ity aho ary nanome hafatra diso mahatsiravina i Firefox milaza fa tsy hainy ny mamaky ilay rohy. Amiko, tsy mendrika hafatra diso izany raha misy olona manindry ny rohy eo amin'ny birao mba hahafahan'ny telefaona finday hiditra amin'ilay rohy. "Tsindrio lava" amin'ny nomeraon-telefaona amin'ny Android ary manandrana miantso nomerao izy na tsia. Diso ve aho? Misy asa ve manodidina?
26 Nov 2011 tamin'ny 9:02 PM
Azo antoka fa kendrena ho an'ny mpampiasa finday, In House.
28 Aogositra 2013 amin'ny 2:46 PM
Azonao atao foana ny misoroka izany amin'ny alàlan'ny detection de browser. Ataovy ao anaty div izay miafina ho an'ireo mpizaha tena tsy finday / lehibe kokoa.
Apr 11, 2011 ao amin'ny 10: PM PM
Misaotra an'ity referrer post Doug :)
14 Jun 2011 amin'ny 11:20 AM
Misaotra anao indrindra. tsotra toa ny nolazainao, nefa mahomby. Afaka mandeha dingana roa ianao ary manaova rohy mankany amin'ny kisary iray ary mamorona lohateny ao amin'ny tag vatofantsika mba hampisehoana ny nomeraon-telefaonanao sy torolàlana fanampiny ho an'ireo mpampiasa izay mampidina ny totozy eo ambonin'ny kisary. Mamerina ny fisaorana anao!
Sep 28, 2011 amin'ny 10: 35 AM
azontsika atao koa ny manampy lahatsoratra amin'ny laharana telefaona hyperlink?
Sep 28, 2011 ao amin'ny 4: PM PM
Mino aho fa ny isa href dia mamela tarehimarika fotsiny… na izany aza, azonao atao ny mametraka izay lahatsoratra tianao ao anatin'ny marika vatofantsika.
May 16, 2012 ao amin'ny 4: 48 PM
Fetsy tsara io! Hanomboka hanampy an'ity amin'ny tranonkala aho manomboka izao. Misaotra!
22 Jan 2013 amin'ny 12:05 PM
Tsy azoko antoka 100% (ary fantatro fa fifanakalozan-kevitra taloha be io, ka mety tsy hovelomina indray izany) fa tsy ny ankamaroan'ny finday avo lenta amin'izao fotoana izao ve no manao an'izany?
22 Jan 2013 amin'ny 1:37 PM
@ facebook-502306174: disqus maro no manao, fa maro koa no mandrafitra diso ny isa raha tsy hoe faritoinao ilay izy.
19 Nov 2013 amin'ny 9:21 maraina
Mar 31, 2015 ao amin'ny 12: PM PM
Fanitsiana tsotra fotsiny… nilaza ianao fa manoro hevitra izahay fa “tazomy ny zava-drehetra fa ny isa tena izy ao anatin'ny sanda href”
Azoko antoka fa ny tianao holazaina dia "tazomy ny zava-drehetra fa ny isa tena OUR amin'ny sandan'ny href"
Na raha tsy izany dia miantso am-peo fotsiny ianao 🙂
Mar 31, 2015 ao amin'ny 5: PM PM
Jul 24, 2015 amin'ny 7: 37 AM
Misaotra Douglas, inona ny Social Media Bar izay ampiasainao? Toa tsara ny bilaoginao ary manana atiny tsara be ianao. Te hifandray amin'ny Google Plus. mamerina ny fisaorana anao
24 Jul 2015 amin'ny 11:04 PM
Misaotra Dean! Rehefa avy nitady vahaolana be dia be aho, dia tonga Shareaholic. Izy io dia manana fiasa tonony bebe kokoa izay tsy ampiasaintsika - saingy malefaka be izy io!
14 Aogositra 2015 amin'ny 3:49 PM
Mbola tsy haiko avy amin'ity tsanganana ity, ny fomba handefasana mailaka laharana telefaona - amin'ny telefaona finday, mba hahafahan'ny lehibeko mipaoka azy fotsiny dia miantso azy.
15 Aogositra 2015 amin'ny 4:21 PM
Salama Dee, ny rindrambaiko mailakao dia mila manohana HTML sy ny fahaizana manampy ny rohy hyperlink fariparitray etsy ambony. Ity lahatsoratra ity dia miresaka bebe kokoa momba ny fomba fanaovana izany amin'ny tranokala finday fa tsy mailaka.
5 Okt 2015 amin'ny 4:11 PM
Salama Douglas, manao ahoana ny fahombiazan'ny fiasan'ity mpiantso iraisam-pirenena ity? Heverinao ve fa tsara kokoa ny mampiasa isa iraisam-pirenena (oh: +44), na kaodim-paritra eo an-toerana?
6 Okt 2015 amin'ny 11:24 PM
Raha ny marina, Ben, mino aho fa mandeha tsy misy kilema io. Mino aho fa mpiantso iraisam-pirenena maro no mampiasa kaody eo an-toerana. Tonga ao an-tsaina avy hatrany ireo artista mpanao hosoka any Nizeria. 🙂
20 Okt 2015 amin'ny 7:32 PM
Salama, azo ampiasaina ve ny tenifototra ho hyperlink hanombohana antso an-tarobia? Naheno aho nilaza izany tamin'ny andro hafa fa tsy nahita. Misaotra anao!
20 Okt 2015 amin'ny 10:51 PM
Mbola tsy nahita an'io aho. Heveriko fa afaka manoratra karazana plugin na script ianao, saingy tsy fiasa HTML natiora.
Oct 23, 2015 amin'ny 12: 46 AM
Ahoana no fomba hamoronana bokotra "miantso izao" amin'ny programa marketing mailaka toa ny Microsoft Publisher? Ary ahoana no hataoko ao anaty mailchimp?
4 Nov 2015 tamin'ny 12:07 PM
Ka tsy mila ampidirina ao - na. eo anelanelan'ny isa? Ary koa, ahoana no ampidiranao ny fanitarana ka hiantso mivantana ilay fanitarana ny rohy hyperlink?
4 Nov 2015 tamin'ny 4:17 PM
Ao anatin'ny sanda href dia tsy mila tadiavina na teboka eo anelanelan'ny isa ianao. Ao anatin'ireo lahatsoratra vatofantsika, azonao atao ny manoratra na inona na inona.
Mar 18, 2016 ao amin'ny 6: PM PM
Lahatsoratra mahafinaritra - tena manampy. Misaotra!
May 25, 2016 amin'ny 7: 02 AM
2 Aogositra 2016 amin'ny 10:59 PM
Salama Douglas, Misaotra betsaka tamin'ny fizarana kaody ity.
Sep 19, 2016 amin'ny 11: 05 AM
Soso-kevitra tsara Doug! Misaotra anao. Ity lahatsoratra ity dia mifandraika kokoa, 6 taona aty aoriana miaraka amin'ny finday rehetra.
Aug 22, 2017 amin'ny 2: 41 AM
Mety io!! Misaotra Doug !! 😉
17 Nov 2017 tamin'ny 10:20 PM
Misaotra anao nanampy!
2 Jan 2019 amin'ny 4:06 PM
Fampianarana tena mampahalala! Raha ny tena izy dia tiako ny lafiny "tsindrio hiantso widget" fa tsy "nomeraon-telefaona azo tsindriana" tsaratsara kokoa. Rehefa avy nanandrana ny plugin Callback Tracker tao amin'ny tranokalako aho dia mahita valiny betsaka kokoa miaraka amin'ny fahaizana miantso ny fitarihako, fa tsy miantso ahy. Izaho manokana dia hitako fa ilaina amin'ny ankamaroan'ny tranonkala. Ity ny rohy mankany amin'ny plugin https://callbacktracker.com/plugins/wordpress-click-to-call-plugin-install-tutorial/
6 Aogositra 2019 amin'ny 1:08 PM
Tena milay, misaotra nizara!